12 Dugsiyada Injineeriyada Aerospace ee ugu Fiican Kanada 2022
12 Dugsiyada Injineeriyada Aerospace ee ugu Fiican Kanada
Dugsiyada injineernimada hawada sare ee Kanada ayaa ka mid ah kuwa ugu fiican adduunka. Faahfaahinta ku saabsan dugsiyada bixiya barnaamijka ayaa lagu bixiyay qoraalkan baloogga si loogu caawiyo ardayda mustaqbalka ee mar walba doonayay inay ka shaqeeyaan aerospace field.
Iyada oo ay ka badan yihiin 700 shirkadood oo hawada sare ah iyo 85,000 shaqaale aqoon leh oo dalka jooga, aerospace ayaa si dhakhso ah u noqonaysa mid ka mid ah warshadaha ugu guulaha badan Kanada. Qaadashada koorsooyinka injineernimada aerospace ee Kanada waa go'aan xirfadeed fantastik ah oo loogu talagalay shakhsiyaadka mihnadda leh ee doonaya inay ka shaqeeyaan warshadaha hawada sare.
Injineerka Aerospace waa goob injineernimo oo dhinacyo badan leh oo ka shaqaysa naqshadeynta, horumarinta, tijaabinta, iyo soo saarista diyaaradaha, dayax -gacmeedka, iyo gantaalaha. Sidoo kale waa goob injineernimo oo ardayda wax ka barata aerodynamics, injineernimada xakamaynta, iyo duulimaadyada, u diyaarinta xirfadaha sida injineerada hawada iyo naqshadeeyayaasha dayax -gacmeedka, iyo waxyaabo kale.
Inaad noqoto injineer aerospace waxay la timaadaa faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin dabacsanaanta ku shaqaynta, kasbashada lacag badan oo ka shaqaysa qaybta gaarka loo leeyahay ka dib qalin-jabinta, sidoo kale waxaad heli doontaa inaad tijaabiso-socodsiiso shaqadaada taas oo labadaba xiiso iyo khatar leh. La shaqaynta diyaaradaha iyo dayax -gacmeedka ayaa noqon kara xirfad soo jiidasho leh. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad u shaqeyso sidii qayb ka mid ah koox soo saarta nidaamyo murugsan.
Haddii aad la yaabbaneyd haddii hay'adaha Kanada ay leeyihiin barnaamijyada injineernimada aerospace ee ugu weyn ama haddii aad rabto inaad wax ka barato injineernimada hawada sare ee Kanada, waxaad timid meesha ugu fiican. Ka -qaybgalka dugsiga injineernimada hawada ee ugu fiican Kanada waa muhiim maxaa yeelay waxaad heli doontaa waxbarashada iyo tababarka ugu weyn ee suurtogalka ah si aad u noqoto injineer hawada sare guuleysta.
Kahor intaadan ka hadlin dugsiyada injineernimada hawada sare ee Kanada, si dhakhso leh u fiiri su'aalaha inta badan la isweydiiyo ee ka hooseeya miiska tusmada.
1 Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Iskuulada Injineerka Aerospace ee ugu Fiican Kanada
1.1 Kanada ma u fiican tahay injineernimada hawada?
1.2 Ma injineernimada hawada sare ayaa laga rabaa Kanada?
1.3 Sideen ku noqdaa injineerka hawada sare ee Kanada?
1.4 Immisa ayey ku kacaysaa barashada injineernimada hawada sare ee Kanada?
1.5 Midkee ka mid ah jaamacadaha Kanada ayaa ugu fiican injineernimada hawada?
2 Iskuulada Aerospace Engineering ee Kanada
2.1 1. Jaamacadda Carleton
2.2 2. Jaamacadda Centennial
2.3 3. Jaamacadda York
2.4 4. Jaamacadda Ryerson
2.5 5. Jaamacadda Toronto
2.6 6. Jaamacadda Concordia
2.7 7. Machadka Farsamada ee Koonfurta Alberta
2.8 8. Jaamacadda Windsor
2.9 9. Jaamacadda McGill
2.10 10. Kuliyada Fanaanada
2.11 11. Polytechnique Montreal
2.12 12. Kulliyadda Confederation
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Iskuulada Injineerka Aerospace ee ugu Fiican Kanada
Kanada ma u fiican tahay injineernimada hawada?
Goobta injineernimada hawada sare ayaa ku sii kordheysa Kanada waxaana loo aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah warshadaha ugu waxqabadka badan dalka. Marka, haa, Kanada waxay u fiican tahay injineernimada hawada.
Ma injineernimada hawada sare ayaa laga rabaa Kanada?
Kaliya maahan laanta hawada, laakiin xirfadda injineernimada lafteeda ayaa aad looga doonayaa Kanada. Marka, haddii aad leedahay xirfado xirfadeed, waayo -aragnimo, iyo aqoon ku saabsan injineernimada hawada sare, waxaad aad ugu baahnaan lahayd Kanada.
Sideen ku noqdaa injineerka hawada sare ee Kanada?
Si aad u noqoto injineer hawada sare ee Kanada, waa inaad buuxisaa dhammaan shuruudaha hoose:
Waa inaad dhammaystirtay oo ku kasbatay bachelor ama shahaadada mastarka injineernimada hawada ama goob la xiriirta, sida injineer farsamo ama fiisikiska injineernimada
Haysashada ugu yaraan 1 sano oo waayo -aragnimo ah
Waa inaad si fiican ugu hadashaa luuqadaha Ingiriiska ama Faransiiska ujeeddooyinka isgaarsiinta, iyo Kanada gudaheeda, labada luuqadood ee waaweyn waa Ingiriis iyo Faransiis.
Waa inaad ka markhaati kacdaa inaad daroogo la'aan tahay
Waa inaad haysataa diiwaanka bilayska oo nadiif ah 5tii sano ee la soo dhaafay (marka laga reebo tigidhada xawaaraha)
Immisa ayey ku kacaysaa barashada injineernimada hawada sare ee Kanada?
Qiimaha barashada injineernimada hawada sare ee Kanada waxay ku kala duwan tahay jaamacad, haddii aad tahay arday caalami ah ama mid gudaha ah, iyo bachelor ama shahaadada mastarka. Tusaale ahaan, Jaamacadda Ryerson, raacitaanka shahaadada qalin -jabinta ee injineernimada hawada sare waxay ku kacdaa $ 9,054.78 ardayda gudaha iyo $ 24,877.66 ardayda caalamiga ah.
Isla iskuulka, laakiin barnaamijka bachelor -ka, barnaamijku wuxuu ku kacayaa inta u dhexeysa $ 7,041 illaa $ 11149 ardayda gudaha halka ardayda caalamiga ah, ay ku kacdo $ 28,570 illaa $ 38,430.
Midkee ka mid ah jaamacadaha Kanada ayaa ugu fiican injineernimada hawada?
Machadka Daraasaadka Aerospace ee Jaamacadda Toronto ayaa ah jaamacadda ugu wanaagsan xagga injineernimada hawada sare ee dalka.
Iyada oo la waydiiyey Su'aalahan Su'aalaha ah oo la wada arkay caddaynta, waxaan hadda si toos ah ugu quusin karnaa mawduuca.
Iskuulada Aerospace Engineering ee Kanada
Kuwa soo socda ayaa ah iskuulada injineernimada aerospace ee ugu fiican Kanada oo aan ku jirin si gaar ah:
Machadka Teknolojiyadda ee Koonfurta Alberta
Farsamada farsamada gacanta ee Montreal
1. Jaamacadda Carleton
Waa inaan ka dhigaa Jaamacadda Carleton inay ugu horreyso liiska iskuulada injineernimada hawada ee Kanada, tanina waa sababta oo ah iskuulku wuxuu leeyahay taariikh yar oo si weyn gacan uga geysatay daraasadda baahsan ee injineernimada hawada sare ee Kanada. Waxay ahayd iskuulkii ugu horreeyay ee aasaasay Bachelor of Engineering (BEng) ee Aerospace Engineering ee dalka kahor intaan dugsiyada kale bilaabin bixinta barnaamijka.
Jaamacadda Carleton waxay ku bixisaa labadaba barnaamijyo shahaadada koowaad iyo jaamacadda ah injineernimada aerospace, barnaamijka shahaadada koowaadna wuxuu u muuqdaa mid ka mid ah kuwa xoogga la saaray. Barnaamijkeeda qalin-jabinta waxaa si wada jir ah loo siiyaa Jaamacadda Ottawa waxaana loo yaqaan Ottawa-Carleton Institute of Mechanical and Aerospace Engineering.
Barnaamijka shahaadada koowaad ee injineernimada hawada wuxuu ka kooban yahay afar durdur: Aerodynamics, Propulsion, iyo Performance Vehicle; Qaab -dhismeedka Aerospace, Nidaamyada, iyo Naqshadda Gaadiidka; Aerospace Electronics and Systems; iyo Naqshadaha Nidaamka Hawada. Barnaamijka bachelor -ka wuxuu socdaa afar sano halka barnaamijka qalin -jabinta lagu dhammeeyo laba sano gudahood.
2. Jaamacadda Centennial
Jaamacadda Centennial waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada hawada sare ee Kanada. Barnaamijka injineernimada hawada sare halkan wuxuu diiradda saarayaa waxyaabo kala duwan sida tirakoobka, firfircoonida, xoogga maaddada, hababka dareeraha, iyo aerodynamics.
Iskuulku wuxuu kaloo bixiyaa diblooma sare oo loo yaqaan Farsamada Injineernimada Waxsoosaarka Aerospace oo wax ku bara hawlgalada wax soo saarka diyaaradaha, nidaamyada aerospace iyo tiknikada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (UAV) oo qaadata 3 sano in la dhammaystiro.
Intaa waxaa sii dheer, iskuulku wuxuu kaloo leeyahay koorso kale oo diblooma ah oo ku taal aagga injineernimada aerospace oo loo yaqaan Farsamada Injineerka Waxsoosaarka Aerospace kaas oo qaadanaya 2 sano oo keliya in la dhammaystiro. Koorsooyinka kale ee duulimaadka ayaa sidoo kale lagu dhigaa machadka.
3. Jaamacadda York
Jaamacadda York waa mid ka mid ah iskuulada ku yaal Kanada ee bixiya iskuulada injineernimada hawada ee Kanada laakiin iskuulkan, waxaa loogu yeeraa Space Engineering oo la siiyo kaliya ardayda dhigata shahaadada koowaad oo ay aqoonsan tahay CEAB. Barnaamijka shahaadada koowaad ee injineernimada hawada waxaa lagu bixiyaa Lassonde School of Engineering, oo ah waaxda injineernimada ee Jaamacadda York.
Baadh mawduucyada sida dhismayaasha dayaxgacmeedyada, koontaroolka wareegga, iyo isgaarsiinta meel-ka-dhulka ah, iyo sidoo kale software duullimaadka iyo robotics-ka. Waxaad baran doontaa oo ku dhaqmi doontaa naqshadeynta iyo maareynta mashaariic kala duwan oo isku dhafan oo u oggolaanaya hawlgallada meelaha ugu fog ee nidaamka qorraxda arday ahaan.
Barnaamijka Injineerinka Hawada ee Lassonde ayaa ku siin doona xirfadaha farsamo ee loo baahan yahay si loo naqshadeeyo xallinta arrimaha Dhulka iyadoo la adeegsanayo hantida meel bannaan ku dhisan iyadoo la adeegsanayo mabaadi'da injineernimada hababka.
4. Jaamacadda Ryerson
Jaamacadda Ryerson waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada hawada sare ee Kanada iyo iskuul sharaf leh oo ku yaal goobta injineernimada, gaar ahaan cilmi baarista. Waxaa jira barnaamijyo jaamacadeed iyo kuwo qalin -jabineed oo ku yaal waaxda Aerospace. Barnaamijka shahaadada koowaad wuxuu socdaa afar sano, halka barnaamijka tababarku uu socdo shan sano.
Xarunta Injineernimada Aerospace ee Ryerson waa mid ka mid ah 23 shaybaar oo qarka u saaran. Waxaad u adeegsan doontaa fiisikiskaaga iyo kartidaada naqshadeynta si aad u xalliso qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu adag adduunka, laga bilaabo naqshadeynta diyaaradda illaa aaladaha barashada mashiinka caqliga leh iyo gawaarida sahaminta hawada. Barnaamijka waxaa aqoonsaday CEAB.
5. Jaamacadda Toronto
Asal ahaan, U of T, sida caadiga ah loogu yeero, waa hay'ad cilmi-baaris u baahan, mana aha wax lala yaabo inay ka mid tahay iskuulada injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Kanada. Barnaamijka injineernimada hawada sare ee Jaamacadda Toronto waxaa lagu bixiyaa Master of Engineering (MEng), Master of Applied Science (MASc), iyo Ph.D. shahaadooyinka. Aagagga cilmi -baarista waxaa ka mid ah nidaamyada duulimaadka diyaaradda iyo xakamaynta, dhaqdhaqaaqa dareeraha xisaabinta, hagaajinta qaabka aerodynamic, hagaajinta qaybaha kala duwan ee diyaaradaha, iyo dhaqdhaqaaqyada dayaaradaha hawada.
Iskuulku wuxuu kaloo bixiyaa barnaamij shahaadada bachelor-ka ah oo afar sano ah si loo barto Sayniska Aerospace iyo Injineerinka.
6. Jaamacadda Concordia
Jaamacadda Concordia waa hay'ad sare oo caan ku ah barashada qaran ahaan iyo caalami ahaanba layaabna ma leh inay ku qoran tahay mid ka mid ah dugsiyada injineernimada hawada sare ee ugu wanaagsan Kanada. Machadku wuxuu kaloo siiyaa MEng injineernimada aerospace marka lagu daro shahaadada Bachelor -ka. Ardayda raacaysa shahaadada mastarka waxay galaangal u yeelan karaan teknoolojiyadda kombiyuutarka ee ugu sarreysa.
Asal ahaan, waxaa tababaray shirkado sida Aveos Fleet Performance, Bombardier Aerospace, Hay'adda Hawada Kanada (CSA), iyo Pratt iyo Whitney Canada. Waxaa lagu weydiin doonaa inaad xoogga saarto Aerospace iyo Propulsion, Dhismayaasha Aerospace iyo Qalabka, ama Avionics iyo Aerospace Systems sanadka ugu horreeya ee waxbarashadaada heerka koowaad.
Marka la dhammaystiro barnaamijkaaga shahaadada ee berrinka, ardaydu waxay awood u yeelan doonaan inay adeegsadaan aqoontooda injineernimada hawada sare iyo hal -abuurkooda, weydiinta, iyo xirfadaha gorfaynta ee warshadaha, dawladda, iyo qaybaha adeegga.
7. Machadka Farsamada ee Koonfurta Alberta
Jaamacadani asal ahaan waa wax kasta oo tikniyoolajiyad ah mana jirto qaab aysan uga soo bixi doonin liiskan iskuulada injineernimada hawada ee Kanada. Machadka Farsamada ee Koonfurta Alberta wuxuu bixiyaa diblooma Tiknoolajiyadda Avionics oo u baahan 2 sano oo waxbarasho waqti-buuxa ah si loo dhammaystiro. Barnaamijka waxaa gebi ahaanba loo bixiyaa tababar la taaban karo.
8. Jaamacadda Windsor
Jaamacadda Windsor waa jaamacad cilmi -baaris caan ku ah Windsor iyo mid ka mid ah dugsiyada injineernimada hawada ee Kanada. Injineernimada makaanikada oo leh ikhtiyaarka Aerospace waa koorsada ardayga heerka koowaad ee caadiga ah ay tahay inuu qaato haddii ay rabaan inay bartaan injineernimada hawada.
Ardayda qalin -jabisa ee danaynaya inay ku sii wataan shahaadada Masterka ee injineernimada aerospace waxay codsan karaan MASc ama MEng ee injineernimada farsamada oo leh feejignaan hawada sare ah. Barnaamijka MASc waa barnaamij ku salaysan cilmi-baaris kaas oo aad ku qaadan doonto afar koorso oo heerka qalin-jabinta ah oo aad ku qori doonto qoraal. Intaa waxaa dheer, barnaamijka MEng wuxuu ardayda uga baahan yahay inay dhammeeyaan siddeed koorso. Asal ahaan, waxaad baran doontaa dhammaan wax -soo -saarka, dayactirka, iyo saadka.
9. Jaamacadda McGill
Jaamacadda McGill waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada hawada sare ee Kanada sidoo kale waxaa loo aqoonsaday inay tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya heer qaran iyo heer caalamiba. Injineerka Aerospace ee Yar ayaa laga heli karaa Jaamacadda McGill. Machadka McGill ee Injineerka Aerospace (MIAE) ayaa ah isha xogtan.
Jaamacaddu waxay bixisaa shahaadada koowaad ee jaamacadda oo ku siineysa ikhtiyaarka aad kaga qeyb qaadan karto mashruuca naqshadeynta aeronautical ee kaabayaasha iskaashiga warshadaha hawada sare sanadkii ugu dambeeyay ee barnaamijka. Xaqiiqdii, haddii aad raadineyso waxbarasho ku saleysan injineernimada aerospace ee Kanada, Jaamacadda McGill waa meesha la aado.
Aeronautics iyo injineernimada hawada, duulimaadyada iyo kontoroolka, agabyada aerospace iyo dhismayaasha, iyo bay'ada dalwaddu waa afarta takhasus ee ay heli karaan ardayda. Kuwa xiiseynaya inay sii wataan waxbarashadooda waxay iska qori karaan shahaadada Masterka ee Waaxda Farsamada Injineernimada ee barnaamijka injineernimada hawada.
10. Kuliyada Fanaanada
Kulliyadda Fanshawe waxay caan ku tahay inay soo bandhigto xirfado gacan-ku-qabasho ah oo laga raadsado xoogga shaqaalaha. Waxaad ku kasban kartaa xirfado kala duwan kulliyadda waxaadna ku kasban kartaa shahaadadaada dhowr bilood gudahood ilaa 2 sano. Machadkan sharafta leh kaliya wuxuu bixiyaa koorsooyin shahaado ah oo ku saabsan injineernimada aerospace oo caadiyan qaadata sannad si loo dhammaystiro.
Isku -darka iyo Agabka Sare ee Wax -soo -saarka Aerospace (CAMAM) iyo Warshadaynta Aerospace Applied (AAM) waa laba ka mid ah barnaamijyada hawada sare ee la heli karo (AAM). AAM waxay ardayda ku qalabeyn doontaa aqoon iyo xirfado khaas ah oo looga baahan yahay xirfadda dayactirka iyo dayactirka diyaaradaha, halka manhajka CAMAM uu xoogga saari doono hubinta tayada, badbaadada, qiimeynta, iyo hababka xakamaynta.
Kulliyadda Fanshawe waa mid ka mid ah iskuulada injineernimada hawada sare ee Kanada waxaadna si dhakhso leh u dhammayn doontaa barnaamijkaaga.
11. Polytechnique Montreal
Polytechnique Montreal waa mid ka mid ah dugsiyada injineernimada hawada sare ee ugu weyn Kanada. Waaxdu waxay leedahay shaybaarka tababbarka ee Waqooyiga Ameerika oo bara jiilka xiga ee injineerada aerospace hab ugu dhow dunida dhabta ah sida suurtogalka ah.
Waxa kale oo jira barnaamij qalin -jabineed oo la heli karo. Qalinjabinta kadib, waxay meeleeyaan ardayda.
12. Kulliyadda Confederation
Barnaamijka dibloomada Tiknoolojiyadda Injineernimada Waxsoosaarka Aerospace ee saddexda sano ah ee laga bixiyo Kulliyadda Confederation wuxuu ka baxsan yahay barnaamijka farsamada ee labada sano si uu kuu baro sida si hufan loogu shaqeeyo warshadaha hawada sare ee Kanada. Adeegso softiweer awood leh sida CATIA. Wax ka baro isku -darka iyo sida ay u saameeyaan duulimaadka.
Ku hel khibrad wax ku ool ah farsamaynta, CNC, iyo mabaadiida kale ee dhismaha. Naqshadaynta mashiinka, naqshadaynta qalabka horumarsan, cilmi -baarista hawlgallada iyo maareynta, iyo wax -soo -saarka oo horumarsan ayaa ka mid ah mowduucyada la daboolay sannadkaaga saddexaad. Manhajkani wuxuu kugu qalabaynayaa xirfadaha aad u baahan tahay si aad boos uga hesho soo -saarka duulista iyo injineernimada oo aad si dhaqso leh u hormariso jaranjarada shirkadaha.
Kuwani waa iskuulada injineernimada hawada sare ee Kanada, si taxaddar leh u dhex mari oo dooro.
8 Kulliyadaha Injineernimada ee Dhexdhexaadka ugu Fiican ee Ardayda
Previous Post:10 Dugsi oo Bixinaya Shahaadada Kalkaalisada 2 sano ee Filibiin
Post Next:14 Kulliyadaha Aerospace Engineering ee ugu Fiican Hindiya